माघी पर्वको सामाजिक र साँस्कृतिक महत्व
मंगलबार पौष २८ , २०७२
नेपाल बहु जातजाती धर्म भाषा र संस्कृतिले भरिएको देश हो । विविधतायुक्त एकताको प्रतिकको रुपमा चिनिएको नेपाल र नेपालीको आफ्नै मौलिकपन छ । जातजातीको आधारमा हाम्रा आफ्नै मुल्य र मान्यता बोकेको कला संस्कृति, संस्कार र परम्पराहरु रहेका छन । आज समाज त्यही मुल्यमान्यता बोकेको संस्कार र संस्कृति भित्र रहि रमाईरहेको छ । पुखौं देखि आत्मसात गर्दै आईरहेका ति सामाजिक परम्पराहरुलाई स्विकार गर्नु समाजको धर्मकर्म बनेको छ । आज बिश्व जगत आधुनिक तथा बैज्ञानिक युगमा प्रवेश गरेको छ । २१ औं शताब्दि सम्म आईपुग्दा बिज्ञानका थुप्रै चमत्कारीक बिकास भैसकेका छन् । जसले हामी मानव जातीकालागि बिश्व नै साँघुरिएको महसुस हुन्छ । हामीले चाहे वमोजिम बिश्वको कुनैपनि कुनामा आफ्ना जीवन र जिविकाका गतिविधीहरु गर्न सक्षम भैसकेका छौं । तरपनि युगौं देखि चल्दै आईरहेको आफ्ना सामाजिक संस्कार र संस्कृतिलाई भुल्नु समाज बिज्ञान विपरितको कार्य हुन जान्छ । किनकी हाम्रा संस्कार र परम्परा सामाजिक बिज्ञानको रुपमा परिणत भैसकेका छन् ।
यहाँका विभिन्न समुदायले मान्दै आएको परम्परा र संस्कृति जस्तै थारु समुदायको माघी पर्व पनि एक हो । यो पर्वको आफ्नै मुल्य र मान्यता रहेको छ । यो पर्वलाई थारु समुदायले धर्म संस्कार अनुसार आमाबाबुलाई भगवानको रुपमा ढोग दर्शन गर्ने गर्दछन । भने आफन्तजन साथीभाईहरुलाई पनि दर्शनभेट गर्ने गरिन्छ । र सांस्कृतिक रुपमा नाचगानका साथै सामाजिक न्याय कानुनको रुपमा पनि लिने गर्दछन । जसको प्रभाव थारु समुदाय वा क्षेत्रमा बसोवास गर्ने अन्य कुनैपनि समुदायका मानिसहरु अनविज्ञ नहोलान् । तर समय परिस्थिती अनुसार यस पर्वको ऐतिहासिकता र महत्वको बारेमा हरेक ब्यक्तिहरु त्यति धेरै जानकारी राख्दैनन् । किनकी समय सापेक्ष मानिसहरु यस पर्वको बारेमा पुष्टा हष्तान्तरणको प्रक्रिया तथा आत्मसात गर्ने तरिका परिर्वतन हुनुले यसको अर्थलाई हल्का बनाउने गरेको पाईन्छ । जे होस माघी पर्व थारु समुदायको धार्मिक तथा सामाजिक रुपमा ठूलो महत्व बोकेको तिहार हो । यो पर्वमा गाउँको नेतृत्व छनौट गरिन्छ । चेलीबेटीहरुसंगको सम्बन्ध कायम राख्न निस्राऊ (नुन चामल) दान दिने प्रचलन रहेको छ । सामाजिक निति नियम र योजना बनाउने गरिन्छ ।
आदिमकाल देखि चल्दै आएको "माघी पर्व अथवा माघ" खासगरी थारुजाती अथवा थारु समुदायले मनाउदै आएको पर्व हो । बिशेषगरी पश्चिम नेपालमा बसोवास गर्ने थारु समुदाय यसपर्वलाई बिशेष महत्वकासाथ मनाउने गर्दछन । आजकल राज्य ब्यवस्था परिवर्तनसंगै यो पर्वलाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएपछि गैरथारु समुदायका सामाजिक कार्यकर्ताहरुबाट समेत यस पर्वलाई माघी मिलनको रुपमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने रुपमा सम्म यो पर्व मनाउदै आएको पाईन्छ । बर्षमा एकपटक आउने यो पर्व माघ महिनाको पहिलो दिन अथवा माघ १ गतेको दिनलाई मानिन्छ । साथै धार्मिक तथा ज्योतिस बिज्ञानको मान्यता अनुसार सुर्य कर्कट राशीबाट मकर राशीमा प्रवेश गर्ने भएकोले नेपालीमा यस दिनलाई मकर संक्रान्ति पनि भन्ने गरिन्छ । यस दिनदेखि घाम अथवा गर्मी मौसमको शुरुवाट तथा जाडो मौसमको बिदाई हुने बिश्वास गरिन्छ ।
परम्परा अनुसार "माघी" को आगमन पौष महिनाको अन्तिम दिन रातीबाट शुरु हुन्छ । उक्त दिनमा खानपीनको लागि लगभग अनिवार्य रुपमा सुंगुर/बंगुरको मासु काट्ने चलन छ । भने रात परेपछि थारु बस्ती बस्तीमा रातभरी नाचगान र ढुमरु गीत गाएर जाग्राम बस्ने गरिन्छ । जवान देखि वृद्ध सम्मका पुरुष ब्यक्तिहरु उक्त नाचगानका गतिविधीहरुमा सहभागि हुने गर्दछन । भने महिलाहरुले जाँडपानी दिएर नाच्ने मान्छेहरुको सेवामा निरन्तर हाजिर रहन्छन । त्यतिबेला गाईने गीत र नाचको आफ्नै रौनक हुन्छ । (जस्तै थारु समुदायमा समय अनुकूलका फरक फरक किसिमको प्रस्तुति र भाकामा नाच तथा गीतहरु गाउने गरिन्छ । ) रातभरको जाग्रामसंगै रातिको लगभग २ बजेदेखि अथवा भाले बासेपछि थारु समुदायका हरेक जसो इच्छुक पुरुषहरु नाचको ग्रुपसंगै नाच्दै गाउँदै नजिकको नदि अथाव कुनैपनि जलासयमा नुहाउन पुग्दछ । नुहाउँदा उनीहरुले नदिलाई दान गर्नेगरी हातमा पैसा अथवा मुद्रा लिएर पानीमा नाङ्गै दुबुल्की मारी नुहाउँदछन । त्यसपछि बाटोको मुल नाकामा तयार भएर बसेका गाउँको मान्यजन बरघर अथवा नाचेको घरको मुली मान्छेको हातबाट काँचो माछा र पिठोबाट बनेको सेटो टिका (सेटो टिका किन लगाईन्छ खोजीको बिषय हुनसक्छ) ग्रहण गरि घरतिर फर्कन्छन । उक्त प्रक्रिया बिहान सुर्य नउदाउन्जेल सम्म जारी रहन्छ । भने भक्तालुजनहरु घर फर्किदाको अवस्थामा उनीहरुबाट पैसा दान पाउन कन्या केटीहरु आफु लुकेर बाटो बाटोमा पानी भरेर कचौरा तथा अम्खोराहरु लामवद्ध रुपमा राखेका हुन्छन । बाटोमा राखिएका ति भाँडाहरुमा भक्तालुहरुले धार्मिक रुपमा आफुले इच्छ्याएको पैसा हाल्नु पर्ने हुन्छ ।
भक्तालुहरु घर फर्किसकेपछि केहीपनि नखाईकन आफ्ना दिदी बहिनीकोलागि घरको कूलदेवतालाई साक्षी राखी नुन र चामलको बिजोरा संख्यामा मुठी चामल (जसलाई थारुमा निस्राऊ भनिन्छ) निकाल्दन । र छिमेकी तथा गाउँका इस्टमित्रहरुको घरघरमा गएर आफन्तजन तथा मान्यजन र साथीभाईहरुलाई दर्शन ढोग गर्ने गर्दछन । त्यसपछि उक्त निस्राऊ घरको कुनैपनि सदस्य बिहान चेलीबेटीको घरमा गएर दिने गरिन्छ । सोही दिनलाई बास्तवमा माघी पर्वको रुपमा लिईन्छ । सो दिन गाउँघरका अधिकांस मानिसहरु मघौटा नाच नाच्ने गर्दछन । सिंगो समुदाय आ—आफ्नो दौतडी अनुसार ग्रुप ग्रुपमा मिलेर नाच्दछन । भने नाच्ने क्रममा दक्षिणा लिनेदिने तरिका पनि अलिक भिन्न हुने गर्दछ । जस्तै नाच्ने मान्छे (नचनियाले) कला प्रर्दशन गरी उल्टो ढाँड गरेर आँखाको परेली र मुखले पैसा टिप्ने गर्दछन । भने पैसा दान गर्ने ब्यक्तिले आफ्नो हैसियत अनुसार पैसा लुटाउने गर्दछन । यसरी एकातिर रमाईलो नाचगान भैरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर सोही दिन गाउँको कुनैपनि घरमा मिठामिठा गुलिया जाँड मागेर खान सम्पूर्ण सर्वसाधारणलाई छुट गरिएको हुन्छ । पहिले पहिले त कसको घरमा कस्तो स्वादको जाँड छ भन्ने कुरा प्राय सबैलाई थाहाँ हुन्थ्यो ।
हर्ष र उमंगको रौनक सकिएपछि भोलीपल्ट सामुहिक रुपमा गाउँको सामाजिक ब्यवहार र कार्यहरुको लेखाजोखा तथा खोजीनितीको लागि बखेरी (गाउँ जनभेला) बस्ने गरिन्छ । किनकी माघी पर्वलाई थारु समुदायले योजना तथा नयाँ बर्षको रुपमा पनि लिने गर्दछन । कुनैपनि नयाँ कामको थालनी यहि दिन अथवा यहि महिना भित्रबाट गरेमा अन्य ब्यवस्थापनको पक्षपनि सोंचेको जस्तो हुन्छ । त्यसैगरी गाउँ बरघरको छनौट, चौकीदार र चिरक्या÷गुरुवा पनि यहि अवधि भित्र निरन्तरता दिने वा नयाँ राख्ने भन्ने निक्र्यौल गरिन्छ । साथै कुनै घरको ब्यक्तिगत तथा पारिवारिक लेखाजोखा र किसन्वा÷घरमुलीको हेरफेर पनि प्राय सोही अवसरमा गर्ने चलन रहेको छ । त्यसैले पनि माघी पर्व सामाजिक न्याय, योजना तथा कानुुन र शासनको थालनी गर्ने पर्व पनि हो । लगभग यस प्रकारको खोजविन गर्ने प्रक्रिया पुरै माघ महिना सम्म हुने गर्दछ । सामाजिक रुपमा कमैया कमलहरी राख्ने र छुटाउने समय पनि यहि हो । नेपाल सरकारले कसैलाई कमैया कमलहरी तथा दासदासी बनाउँन नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । तर यस भन्दा पहिले मानव वेचविखन सरहको कसैको घरमा कमैया राख्ने नराख्ने निर्णय पनि सोही माघी अथवा माघ महिनालाई कुर्नु पर्दथ्यो । त्यसैले पनि यो पर्वलाई मुक्तिको दिनको रुपमा समेत बुझ्ने गर्दथे ।
विगत लामो समय देखि दासताको जीवन ब्यतित गरिरहेका थारुजाती यतिबेला मुक्तिको अनुभुति सहित परिवारको सम्र्पकमा आउने र सुखदुख सातासात गर्ने गर्दछन । स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले मिठा मिठा परिकार खाने तरुल माछा मासु र जाडोसंग लड्न सक्ने परिकारले यो पर्वको थप महत्व छ । अहिले परिस्थिती बदलिएको छ भने क्षेत्र अनुसार थारु समुदायले माघीलाई मनाउने कार्यमा फरकपना आएको देखिन्छ । कसैले माघीलाई रमाईलो पर्वको रुपमा मात्र लिने गर्दछन । बिशेषगरी यूवा पिंढीले यूवा क्लबहरु मार्फत आर्थिक संकलन र रमाईलो गर्ने गर्दछन भने थारु संस्कृति लोप हुनसक्छ भनि माघी पर्वलाई खुल्ला मच्चहरुमा र जनसभाहरुमा संस्कृति संरक्षण तथा प्रचार प्रसारमा परिणत गरिएको छ । सामाजिक र राजनितिक कार्यको अवसरको रुपमा मात्र यो पर्वको बिकास गर्ने हो भने माघी पर्वको मौलिकता हराएर जान सक्छ । साथै धार्मिक, साँस्कृतिक तथा परम्परागत महत्वलाई अपचलन गरी माघी मनाउँदा भावि सन्ततिले फरक अर्थको रुपमा लिनेछन् । किनकी हामीले जाँड रक्सी खानपिन गर्ने र नाचगान गर्नेलाई मात्र महत्व दिएमा र धार्मिक प्रचलन तथा क्रियाकर्मलाई छोड्दै गएमा यो पर्व इतिहासमा मात्र सिमित रहनेछ । वास्तवमै यो पर्व सामाजिक रुपमा थारुजातीको स्वतन्त्रता र मुक्तिको दिन, नयाँ योजना निर्माण र नेतृत्व छनौट गर्ने, चेलीवेटीसंगको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने र एकआपसमा आर्शिवाद लिन र दिने दिनको रुपमा लिने परम्परालाई संरक्षण गर्ने हो । भने यो पर्वको महत्वलाई अझ फराकिलो पार्नकोलागि राष्ट्रिय तहमा स्थापित गर्नुपर्छ । जसकालागि सकारात्मक सामाजिक कानुन र सकारात्मक पुराना संस्कार र संस्कृतिको जगेर्नाकालागि ब्यापक प्रचार प्रसार हुनेगरी गर्नुपर्छ । र राज्यद्धारा पर्व मनाउने मनाउने गरेमा बास्तविक अर्थमा यसको संरक्षण हुनेछ ।
स्राेतः रेडियाे रामज्ञानु, सानाेश्री, बर्दिया
थारु समुदायको यमोसा (पितृऔंसी) पर्व र साँस्कृतिक अधिकारको सवाल
हाम्रो देशको सन्दर्भमा सर्वस्वीकार्य र सर्वमान्य तथ्य कुरा के हो भने नेपाल एक बहुधार्मिक, बहुभाषिक, बहुजातीय तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । दर्जनभन्दा बढी धर्म, सयभन्दा बढी भाषाभाषी र जातजाति तथा त्यसभन्दा पनि कैयौं बढी रितिरिवाज, परम्परा, चालचलन, संस्कार तथा संस्कृतिहरु नेपालको गौरव र गरिमामय चिनारी हुन् । जातीय विविधता तथा सांस्कृतिक विविधता हामी सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय पहिचान हो । त्यसकारण सबै किसिमका संस्कृतिहरु समान रुपमा हुर्कने र मौलाउने वातावरण देशमा हुन सकेको खण्डमा “सयौं थुँगा फूलका हामी एउटै माला नेपाली” राष्ट्रगानको औचित्य हुनसक्छ । त्यसैले हाम्रा सबै किसिमका संस्कृतिहरुलाई एउटै प्लेटमा सजाएर “सलाद संस्कृति” को रुपमा विकास गर्नुपर्छ । जसरी सलादमा विभिन्न प्रकारका फलपूmल लगायत गाजर, मूला, काक्रो इत्यादि एउटै प्लेटमा पस्केर हरेक टुक्रा सलादको फरक स्वाद लिन पाइन्छ, त्यसैगरी एउटै स्थानमा थुप्रै किसिमका संस्कृतिहरुको विकास भएमा फरक फरक सांस्कृतिक स्वाद लिन र पस्किन पाइन्छ । तर यहाँ एकात्मवादी, महेन्द्रवादी तथा यथास्थितिवादी सोंच र चिन्तन बोकेका केही सघंसंस्था वा निकायका प्रमुख, शासक, प्रशासक तथा व्यक्तिहरुले अझै पनि एउटै भाषा, एउटै धर्म र एउटै संस्कृतिको जालो बुनीरहेका छन् । थारु समुदायमा स्वतन्त्र रुपमा हुर्कने र मौलाउने वातावरणको अभावमा लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको एउटा अमूल्य सांस्कृतिक पर्व “यम्वासा वा यमोसा” अर्थात् पितृऔंसी पनि हो ।
यमोसा पर्वको परिचयः
थारु समुदाय सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण भएको एउटा समुदाय हो । थारु जातिले वर्षभरिमा दर्जनौं चाडपर्व मनाउँछन् । हरेक पर्वहरुको आफ्नै विशेषता र आफ्नै महत्व हुन्छ । ती चाडपर्वहरु मध्ये “यमोसा” (पितृ औंसी) पर्व पनि एक हो । “यमोसा” चितवन र नवलपुरका थारु समुदायले मनाउने एउटा महत्वपूर्ण चाड हो । यस चाडमा थारु समुदायका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुले पितृहरुलाई तर्पण गर्ने गर्दछन् र उक्त दिन औंसी पर्ने भएकोले यस पर्वलाई पितृआंैसी पनि भनिन्छ । यो पर्व असोज महिनाको औंसीको दिन पर्दछ । दशैंको घटस्थापनाको ठीक अघिल्लो दिनलाई यमोसा भनिन्छ । यमोसा पर्व दुई दिन धुमधामसँग मनाइन्छ । यमोसाको अघिल्लो दिनलाई मछुवारी (माछा मार्ने) भनिन्छ । त्यस दिन व्यक्तिगत वा सामूहिक रुपमा खोलानाला, नदी, ताल, पोखरी आदिमा घौका, जाल, डेली, कोइनी, ढडिया आदि सरसामान लिई माछा मार्ने चलन छ । खसी, बोका, हाँस, कुखुरा काट्ने गर्छन् । अर्को दिन अर्थात् यमोसाको दिन बिहानै पुरुषहरु आपूmले देखेका दाभी (सिरु) काटी ल्याउँछन् । त्यसलाई केलाएर करीब एक हात लामो कुचो बनाई धोई पखालेर घर अगाडि गाईको गोबरले पोतेको ठाउँमा पिर्कामा उक्त सिरुको मुठा राखी पितृ स्थापना (पहुनी बेठोइ) गरिन्छ । पहुनीलाई विभिन्न थरीका पूmलहरुले सिंगारिन्छ । घाम नलागोस् भनी छाता वा छतिया ओढाइन्छ । पहुनीको अगाडि ल्वाङ, सुकमेल, पान, सुपारी, सुर्ती, चुरोट, रक्सी र पानी राखिन्छ । त्यस वर्षभरि कुनै परिवारको सदस्यको मृत्यु भएको छ भने अनिवार्य रुपमा बोका काटेर त्यसको रगत चढाउने गरिन्छ । तर मृत्यु भएको छैन भने त्यस दिन कुनै मारकाट गर्ने चलन छैन । त्यस दिन बिहानै बालबच्चादेखि बुढाबुढी सबैजना नुहाई कुशपानीले पितृगणलाई तर्पण गरिन्छ । नुहाइधुवाइ गरीसकेपछि नयाँ कपडा वा सफा कपडा लगाएर पहुनीको अगाडि बसेर प्रत्येकले रक्सी र पानीको केही थोपा चढाउने (छाकी चढोई) गरिन्छ । त्यसपछि मात्र खानपिन शुरु हुन्छ । सर्वप्रथम छोरी, ज्वाइँ वा कुनै पाहुना बोलाई खातिरदारीकासाथ चौरासी व्यञ्जन खुवाइन्छ । यसरी पाहुनालाई खुवाउनुलाई “पितरी बेठोई” भनिन्छ । पाहुनालाई खुवाइसकेपछि मात्र आपूmले खाने गरिन्छ । यता केटीहरुले पाहुनाको कपालमा तेल लगाई काइँयोले कोरीदिने गरिन्छ । त्यसपछि उल्टो नाङ्लोमा पानी राखी पाहुनालाई छम्केर शितलता प्रदान गरिन्छ । त्यसलाई “पित्पित्रायन खेदई” भनिन्छ । उक्त दिन घरमा जो कोही आए पनि पाहुना नै भनिन्छ र पाहुनालाई खुवाएरै पठाउनुपर्छ । यमोसाको दिन पाहुनालाई पितृगणको रुपमा हेरिन्छ । यसरी खानपिन दिनभरि नै चलिरहन्छ । उता गाउँका सबैजना एकैठाउँमा भेला भई पिङ खेलेर (बरहा झुलके) रमाइलो गरिन्छ । पहिले पहिले एउटै रुखमा पाँच छ वटा पिङ लगाइन्थ्यो । यता केटाहरुले साँझपख गाउँको बाटोको महत्वपूर्ण ठाउँमा “म्वाढ्हा” गाड्छन् र ठूलाबडाले त्यसलाई उखेल्ने प्रयास गर्छन् ।
बेलुकीपख बालबालिका तथा केटाकेटीहरु समूह समूहमा मिलेर घर–घरमा “यमोसा” खान जान्छन् । हरेक घरमा विभिन्न किसिमका अनेकौं परम्परागत गीत गाउँदै यमोसा खान्छन् । उनीहरुले गाउने केही गीतहरुका अंश यसप्रकारका छन् –
मोदहर्नीक मोदवा घुघुल बाजे ......
गवैया महिला पुरुषहरु भने त्यस रातभरि गाउँको कुनै एक घरमा जम्मा भई गीत गाउने चलन रहेको छ । तर अब ती गीतहरु, ती म्वाढ्हा र बरहाहरु, पितरी र पित्पित्रायनहरु, ती पहुनी र छाकीहरु.....सबै सबै लोप हुँदैछ । कालान्तरमा थारु समुदायले पनि यमोसाको सट्टा दशैं मात्र मनाउनेछ । किनकी हाम्रो देशमा यमोसा मनाउने वातावरण छैन । वातावरण बिगार्ने काम राज्यबाट भएको छ । थारु समुदायलाई आफ्नो संस्कृति, रितिरिवाज प्यारो लाग्छ तर बाध्य भई आफ्नो संस्कृति छोड्नु परिरहेको छ । किनकी यहाँ नाम मात्रको सद्भाव छ तर गहिरिएर हेर्ने हो भने साँस्कृतिक सद्भाव छैन ।
नेपालमा साँस्कृतिक विभेदको उदयः
विगत दुईसय वर्षभन्दा अगाडिदेखि राज्यले नै यस्तो नीति लिएर शासनसत्ता लाद्दै आइरहेको छ । पृथ्वीनारायण शाहले एकिकरण गर्दा साना राज्यहरुलाई आफ्नो राज्यमा विलय गराउने कामको शुरुवात त गरे । त्यसका साथै उनले आदिवासी जनजातिका रितिरिवाज र संस्कृतिलाई पनि खस संस्कृतिमा विलय गराउने कामको पनि थलनी गरेकै हो । हिन्दु वर्णाश्रमभित्र नपर्ने समुदायलाई पनि “चार जात छत्तिस वर्णको फूलबारी” भनी गैरहिन्दुलाई हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार विभाजनको सूत्रपात गरेकै हो । सन् १७९३ मा तत्कालीन राजा रणबहादुर शाहको पालामा नेपालमा मुलुकी ऐन जारी भयो । उक्त ऐन ब्राह्मणवादी तथा हिन्दुवादी धर्मशास्त्रबाट नै प्रभावित थियो । त्यस ऐनमा आस्था अथवा धार्मिक क्रियाक्रम सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । जनताका परम्परागत अधिकारहरुमा थिति कर लगाइएको थियो । थिति अन्तर्गतका नीति–नियमहरुमा साँस्कृतिक र परम्परागत रीतिरिवाजका कामहरु पर्दथे । अर्थात खस संस्कृति मान्नै पर्ने कानून बन्यो । दशैं मनाउनै पर्ने हुकुम हुन्थ्यो । ती साम्प्रदायिक तथा जातीय कानून नमानेको खण्डमा थितिकरको नियम अनुसार जनताले ठूलो दण्ड जरिवाना र भारी कर तिर्नुपर्दथ्यो ।
राज्यले आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदालाई खस संस्कृतिमा विलय गराउनका निम्ति विभिन्न किसिमका रणनीति अपनाउँदै आएको छ । राज्यले कानूनी रुपमै आदिवासी जनजातिको संस्कृतिलाई बन्देज र व्यवहारिक रुपमा आदिवासी जनजातिको संस्कृतिको अवहेलना तथा खस संस्कृतिलाई बढावा दिदैं आएको छ । दुई सय वर्ष अगाडि राज्यले लिखित र व्यवहारिक रुपमा आदिवासी जनजातिको संस्कृति विरोधी मुलुकी ऐन जारी गरी सोही अनुसार ब्राह्मणवादी शासकहरुले शासनसत्ता चलाउँदै आए भने हाल आएर लिखित रुपमा आदिवासीका संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने भनिए तापनि व्यवहारिक रुपमा हिन्दु खस ब्राह्मणवादी संस्कृतिलाई मात्र बढावा दिने तर आदिवासी जनताहरुका सभ्यता र संस्कृतिलाई उपहास र उपेक्षा गर्ने गरिएको छ । दशैंमा पन्ध्र–पन्ध्र दिनसम्म शिक्षण संस्थाहरुमा विदा हुने, त्यति मात्र नभई कर्मचारीहरुलाई उक्त चाड मनाउन एक महिनाको तलब बराबर दशैं खर्च शीर्षकमा भत्ता पनि प्रदान गर्ने तर थारुको यमोसा जस्तो गरिमामय सांस्कृतिक चाडपर्वमा एकदिन पनि विदा नहुनुको मतलव थारुहरुलाई यमोसा मनाउन अघोषित प्रतिबन्ध लगाउनु हो । त्यति मात्र होइन, प्याब्सन र सोसेब्स जस्ता शैक्षिक माफियाहरुको संगठनले त हरेक वर्ष यमोसाकै दिनमा पनि त्रैमासिक परीक्षा लिने गर्दछ । यस किसिमको सांस्कृतिक थिचोमिचो थारुहरुले भोगीरहेका छन् । तर गैरथारुहरुले भन्ने गर्छन् — हामीले एक अर्काको धर्म, संस्कार तथा संस्कृतिलाई सम्मान गर्छौ । मुखमा राम राम बगलीमा छुरा ।
साँस्कृतिक अधिकारको सवालः
नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि धारा १७.३ मार्फत् भन्दछ —“नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, साँस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने हक हुन्छ ।” नयाँ संविाधानको धारा (३२) को भाषा तथा संस्कृतिको हकको उपधारा (२) मा “प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ ।” र उपधारा (३) मा “नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ ।” भनी लेखिएको छ । कागजी रुपमा संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने अधिकार उल्लेख भए तापनि व्यवहारिक रुपमा कुनै हक अधिकारको अनुभूति समुदायले गर्न सकेका छैन । किनकी संस्कृति, रितिरिवाज, संस्कार, चलन इत्यादि नयाँ पुस्तालाई हस्तान्त्रण हुन नसकेमा कुनै पनि हालतमा संरक्षण हुन सक्तैन । नयाँ पुस्ता भनेको बालबालिकाहरु हुन् । तिनीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना संस्कृति अनुभव गर्ने समय नपाउँदा बुझ्न र सिक्न पनि सक्दैनन् । फलस्वरुप संस्कृति हस्तान्त्रण हुन नसकी लोप हुनेछ । त्यसैले संविधानमा लेखेर मात्र पुग्दैन त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नको लागि राज्यले ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको धारा ८.१ अनुसार “आदिवासी जनजाति तथा व्यक्तिहरुलाई बलपूर्वक विलयन नहुने वा आफ्नो संस्कृतिको विनाश नगराउने अधिकार छ ।” त्यस्तै धारा ११.१ अनुसार “आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो सांस्कृतिक परम्परा र प्रचलनहरु मान्ने तथा तिनलाई पुनः जीवन्त तुल्याउने अधिकार छ ।” उक्त अधिकार व्यवहारिक रुपमा स्थापित गर्नका लागि थारु समुदायले निरन्तर रुपमा सांस्कृतिक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकी संघर्ष विना कसैले पनि कुनै किसिमको हक अधिकार स्थापित गरेको रेकर्ड छैन ।
यमोसा पर्वमा विदा गर्न थारु समुदायको मागः
यमोसा अर्थात् पितृऔंसीमा विदाको व्यवस्था हुनुपर्छ भनी थारु विद्यार्थी समाज चितवनले अनेकौं पटक आग्रह ग¥यो । पूर्वी चितवनमा थारु विद्यार्थाी समाज, थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा र सोसेब्स्(सोसाइटी अफ इस्टर्न चितवन बोर्डिङ्ग स्कुल) बीच वार्ता र सहमति पनि भएकै हो । तर गद्दारहरुले सहमति उल्लघंन ग¥यो र दोष थोप¥यो प्याब्सनको थाप्लोमा । तर अर्को वर्ष पनि प्याब्सनले यमोसामा विदा दिन आवश्यक ठानेन बरु सोही दिन परीक्षा संचालन ग¥यो र उसले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दोषी देखायो । थारु विद्यार्थी समाज र थारु कल्याणकारिणी सभाले जिशिकालाई ज्ञापनपत्र नदिएको होइन । जिशिकाले प्याब्सन, सोसेब्स लगायत सम्पूर्ण विद्ययालय र कलेजहरुलाई निर्देशन जारी गरी उक्त एकदिन स्थानीय विदाको लागि परिपत्र जारी गर्न सक्थ्यो । तर गरेन । ‘ज्ञापनपत्र शिक्षा मन्त्रालयमा गएर दिनू’ जस्ता गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएर टार्ने कोशिश गरियो । यसरी पटक पटक चरणबद्ध रुपमा थारुहरुले यमोसा पर्वमा विदाको सवाल उठाएको दश वर्ष बित्यो । अब उप्रान्त थारुहरुले यमोसा पर्व आफ्नो घर–आँगनमा होइन सडकमा मनाउने सल्लाह गर्दैछन् । यमोसा पर्व चितवन र नवलपुर क्षेत्रका थारुहरुले मात्र मनाउने चाडपर्व भएकाले उनीहरुले राष्ट्रिय विदाको सवाल उठाएकै होइन । स्थानीय विदाको सवाल उठाएको हो । तर सरोकारवालाहरुले बलमिचाई गरेर थारु सभ्यता र संस्कृति विलय वा विनाश गराउन चाहन्छ भने त्यसको परिणाम ती सबै सरोकारवाला संस्थाहरुले भोग्नुपर्ने हुन्छ । जंगली पशुपंक्षी लोप हुँदा चिन्तित हुने राज्यले आदिवासी जनजातिका संस्कृति लोप हुँदा त्यतिकै चिन्तन गर्नुपर्छ । यदि समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्ने हो भने आदिवासीका चाडपर्व मनाउन आदिवासी कर्मचारीहरुलाई भत्ता दिन सक्नुपर्छ । नसके यमोसा जस्ता साँस्कृतिक चाडपर्वमा विदाको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
१. लक्ष्मण प्रसाद चौधरी, यम्वासा, चितवन थारु संस्कृति स्मारिका–२०६३
२. डा. विष्णु प्रसाद घिमिरे, चितवनका आदिवासी जनजातिको सामाजिक र साँस्कृतिक अध्ययन
३. लीना चौधरी, थारु समाजमा हराइरहेको पितृऔंसी (यम्वासा), शहीद स्मारिका–२०६३
४. प्रदीप चौधरी, थारु जातिक पाबनी सबह, हमार चिनारी
५. नेपालका राजाहरु तथा तराईका थारुहरु
६. नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३
७. नेपालको संविधान–२०७२
८. आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र
महाभारतको प्रारुप थारू जातिको ‘बर्का नाच’ — छविलाल कोपिला
समय आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । समयसंगै हाम्रा मौलिक कला, संस्कृति तथा संस्कार पनि परिवर्तन हुँदै गएका छन् । संस्कृति समयानुसार परिवर्तन हुनु स्वभाविक हो । तर कैयौं हाम्रा संस्कृतिहरु पूर्ण रुपले लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । र भविष्यमा यसको अवस्था के हुने भन्ने चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । हामी, हाम्रो संस्कृति निकै धनी छ भनेर भन्छौं । हाम्रो संस्कृति भनेर गर्व पनि गछौं । तर हाम्रो मौलिकता ह्रास हुँदै गएको कुराप्रति गम्भीर नहुनु ठूलो विडम्वना हो । यसको खासकारण बाह्यसंस्कृति प्रभाव नै हो । तर, हामी हाम्रै संस्कृतिप्रति रुचि नराख्नु पनि हामी दोषीको भागीदार हौं । अहिले, विभिन्न जाति, समुदायको मिश्रित बसाईका कारण पनि हाम्रो संस्कृति मिश्रित संस्कृतिको रुपमा रुपान्तरित हुँदैछ । बाह्यसंस्कृतिको प्रभाव पनि उत्तिकै पर्दै गएको छ । अरुको संस्कृति अगाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन । आफ्नो मात्रै ठीक भन्ने पनि होइन । यसले अतिवाद जन्माउँछ । अतिवादले विभेद, अहंकार र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । कतिपय संस्कृति त राम्रा पनि हुन सक्छन् । तर अरुको मात्रै राम्रो देख्ने संस्कार भने राम्रो होइन । हामी अहिलेसम्म यही नियत भोगिरहेका छौं । हामी हाम्रै संस्कृतिभित्र राम्रो र गलत कुरा केलाउन सक्ने क्षमता राख्न सक्नु पर्छ । हाम्रो संस्कृतिभित्र रहेका मौलिकता हाम्रो निजी पहिचान हो । जहाँ हाम्रो कला, रीति–रिवाज, चाल चलन, लवाई–खवाई, संस्कार र जीवन पद्दतिसंग सम्बन्धित हुन्छ ।
यहाँ थारू जातिको ‘बर्का नाच’ को बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । यो नाच थारू जातिको ‘हरेरी’ पूजा पछि नाचिन्छ र तिहारपछि विधिवत् पूजा गरेर अन्त्य गरिन्छ । किसानले लगाएको बालीनाली सप्रियोस्, किरा फट्याङ्ग्रा नलागून्, जमीनमा उर्बरा शक्ति बढोस् र उत्पादनमा बृद्धि होस् भन्ने जनविश्वासमा गरिने ‘हरेरी’ पूजा प्रायः भदौं महिनामा हुन्छ । यो पूजा भन्दा पहिले ‘बर्का नाच’को नाममा गीत गाउन र मादल, झाल–कस्टार बजाउन नपाइने परम्परागत नियम छ । महाभारत कथामा आधरित थारू पुराण ‘बर्कीमार’ गीतमा नाचिने यो नाच पुरुषहरुले नाच्ने सामुहिक नाच हो । प्रारम्भिक चरणमा यो नाच मादलको २२ तालमा नाचिए पनि अहिले सीमित तालमा मात्र नाच्ने गरेको पाइन्छ । मादल बजाउने मादलेहरु नै बजाउने ताल बिर्सिएपछि यो समस्या देखा परेको हो ।
यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने दाङको देउखुरी (स्थानीय भाषामा द्यौखर) को गोबरडिहा गाविस अन्तर्गत पर्ने महदेवा गाउँबाट सुरु भएको पाइन्छ । वि.स.१९७८ सालमा नारायणप्रसाद चौधरीको नेतृत्वको टालीको प्रयासमा पहिलो अभ्यास गरिएको थियो । यो नाच महाभारत कथालाई अध्ययन गरी मुङ्ग्रा (गडा) लिएर नाचियो र यही पराम्पराले नै अहिलेसम्म निरन्तरता पायो । नाचमा ‘बर्कीमार’ गीत गाएर नाचिन्छ । तर ‘बर्कीमार’ कसले रच्यो र कहिले रचना गरियो भन्ने विषयको भने अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी फेला परेको छैन । त्यसो त थारू समुदायका अधिकांश सिर्जनाहरु मौखिक रुपमै पुस्तान्तरण हुँदै आए । यसरी मौखिक पुस्तान्तरण हुँदा वास्तविक सिर्जनाकार ओझेल पर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाली साहित्यको शुरुवात नेपाल एकीकरण पछि भएको मानिन्छ । त्यसैताका वि.सं. १८२५ सालमा प्रकासित सुवानन्द दासको ‘पृथ्वीनारायण शाह’ शीर्षकको कवितालाई पहिलो औपचारिक साहित्य मानिन्छ । थारू भाषा साहित्यको औपचारिक साहित्य लेखनको तथ्य जानकारी बाहिर आएको छैन । यद्यपि विषयवस्तुको हिसावले हेर्ने हो भने यो गीत पनि त्यसै समयको सेरोफेरोमा रचिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । किन भने प्रकृतिपुजक थारू जातिको पूजापाठ, चाड पर्व, रीति, संस्कृतिलाई हेर्ने हो भने प्रायः हिन्दू धर्मसंग मेल खाँदैन । कला, संस्कृति, रहन सहन र प्रकृतिप्रति अत्याधिक विश्वास गर्ने हुनले ‘प्राकृत’ धर्म नै थारू जातिको प्राचीन धर्म हो भन्ने धारणा पनि जनमानसमा छ । नेपाल एकीकरण पछि एक भाषा, एक धर्म र एक नीति लागूसंगै यहाँका थारू लगायत अन्य आदिवासी जनजातिहरुलाई पनि हिन्दूकरण गरिएको देखिन्छ । यसरी थारू जातिलाई पूजापाठको आधारणमा हेर्ने होे भने आवरणमा हिन्दू, स्वभावमा बुद्ध र व्यवहारमा प्राकृत धर्म मान्छन् । पछिल्लो समयमा थारूहरु पनि आफू जान अन्जान क्रिश्चियन धर्मप्रति पनि आकर्षित हुँदै गएका छन् । राज्यको लामो समयको एक छत्र धार्मिक दवावको कारण थारुहरु आफू हिन्दू भन्ना थालेका हुन् । यसैको प्रभाव हुनसक्छ थारू समुदायमा पनि हिन्दू ग्रन्थ र मिथकहरुसंग सम्बन्धित केही गीतहरु सिर्जना भएको पाइन्छ । ‘बर्कीमार’ पनि महर्षि वेदव्यासद्वारा रचित हिन्दू धर्मग्रन्थ महाभारतको भाव अनुवादित ‘थारू पुराण’ हो । यसकारण ‘बर्कीमार’ पनि नेपाली साहित्यको प्राथमिककाल (वि.सं. १८०१–१९४०) मा रचना गरिएको हुनुपर्छ । बर्का नाचमा गीत भन्दा मादलको प्रधानता हुन्छ । गीत गाइए पनि मादलको तालमा गडा जुधाउने र शरिरको आउभाउ पनि यसले निर्धारण गर्छ । गडा (गजा) लिएर नाच्ने भएकोले यो नाच महाभारतमा उल्लेखित कुरुक्षेत्रको लडाईको झलक दिन्छ ।
अत्याधिक खर्चकारण यो नाच निरन्तरता पाउन सकेन । पछि दाङ नारायणपुर गाविस अन्तर्गत जलौरा निवासी रुपलाल चौधरी वि.स. २०१० सालमा आफ्नै गाउँ पुनः शुरु गराए । उनले नाचको सबै विधि प्रक्रिया महदेवाबाट सिकेर आफ्नो गाउँमा नचाएका हुन । चौधरीको यो कामले पुनर्जागरण ल्याएको मानिन्छ । पछि २०१६ सालमा योगी नरहरिनाथ, बद्रिनाथ योगीको सहयोगमा ‘बर्कीमार’ पुस्तक पनि प्रकाशित भयो । जसले हिजो मौखिक रुपमा गाइने बर्कीमार प्रकाशनपछि दस्तावेजीकरण भयो र सुरक्षित पनि भयो । यही पुस्तकबाट धेरैले गाउन पनि सिके । तर, अहिले यो पुस्तक प्रायः दुर्लभ भइसकेको छ । नाचको सन्दर्भमा कुरा गर्दा अहिले यो दाङको जलौरामा मात्र सीमित छ । बर्दियाको उल्टनपुरमा पनि यो नाच नाचिने गरेको कुरा बाहिर आए पनि यो पंक्तिकारलाई आधिकारिक जानकारी छैन । जलौराको बर्का नाचको अगुवाई भने रुपलाल चौधरीका छोरा चन्द्रप्रसाद चौधरीले गर्दै आएका छन् । यो पनि अहिले नियमित छैन । यो नाच हेर्नका लागि कुनै महोत्सव या कार्यक्रममा पर्खिनु पर्ने अवस्था छ । अहिले यो नाचले सीप पुस्तान्तरणको ठूलो चुनौति भोगिरहेको छ । नयाँ पुस्ताहरु यसप्रति कुनै चाँसो नदेखाएको अवस्था छ । यसका धेरैजसो कलाकारहरु ५० वर्ष माथि समुहका मात्रै छन् । त्यसकरण यसको कुनै विकल्प नखोजिए हाल नाचिरहेको पुस्ताको अन्त्यसंगै यो नाचको पनि प्रायः अन्त्य हुने निश्चित देखिन्छ ।
यस नाचप्रति चासो नहुनुको अर्को प्रमुख कारण खर्च पनि हो । यसको तयारीको लागि ठूलो खर्च लाग्ने गर्छ । त्यसकारण खर्च योजनाको तयारी पछि मात्र नाच थालिन्छ । आर्थिक रुपमा धेरै खर्चिलो भएकोले यो कमजोर हुँदै गएको सहजै स्वीकार्न सकिन्छ । नाचको शुरुवातमा रजावर मर्वा (भूँइह्यार थान) को कुनै एक कुनामा पाण्डव र केही कौरव पात्रहरुको प्रतिकात्मक ध्वजा गाडिन्छ । नाच सकिएपछि यसरी गाडिएको ध्वजा र मर्वामा बिशेष पूजा गरिन्छ । पूजामा अत्याधिक संख्यामा पशु–पन्छीहरुको बली चढाइन्छ । शुरुवात भने सामान्य छाँकी (रक्सी र जल) चढाएर गरिन्छ । पूजा रजावर मर्वामा आफ्नो मौलिक रीत प्रक्रिया अनुसार गरिन्छ । जसमा दुई वटा बोका, एक वटा भेडा, दुई वटा पाठी, सुंगुर चार वटा र झण्डै एक सय दश वटा चल्ला पुजिन्छ । पूजा गर्नुभन्दा पहिले बीचमा सबैभन्दा अग्लो टाँरवान (बाँसको अग्लो लिङ्गो) जसमा कालो खोल र कालो सूरही गाईको पुच्छर जोडिएको हुन्छ । त्यसैगरि राजा युधिष्ठिरको टाँरवान पनि गाडिन्छ । त्यसैको पूवैतिर रानी दूर्पतीको टाँरवान रातो र टुप्पमा लोटा बाँधिएको हुन्छ । ह्यौटाको टाँरवानको पश्चिमतिर र कौरव राजा जिरिजोधन (दुर्योधन)को टाँरवान सेतो खोल र कालो सूरही गाईको पुच्छर बाँधिएको हुन्छ । र अन्त्यमा सबैभन्दा पश्चिम सैनिकवृक्षको टाँरवान कालो खोल र कालो सूरही गाईको पुच्छर जोडिएको हुन्छ ।
पूजामा सबै कलाकारहरु मिलेर एउटा ठूलो जोंजा (मसाल) बाल्ने गर्छन् । त्यही ठाउँमा गुर्वालाई बसालेर चल्लाको टाउको हातले निमोटेर गुर्वाको टाउकोमा चढाउँछन् । संगै जल–रक्सीको छाँकी पनि चढाउँछन् । अन्त्यमा सबै टाँरवान उखेर एउटा रुखमा (बर, पिपर या सीमल आदि) बाँध्ने गर्छन् । रुखको मुनतिर पश्चिमतिर मुख फर्काएर गाईको गोबरले लिपपोत गरिन्छ र ‘बघेश्री’ देवीलाई खाल्डो खनेर अण्डा (फुल) चढाइन्छ अनि त्यहीं एउटा चल्ला पनि पुजिन्छ । आज नाचको डिवाँ राख्ने (यति वर्ष नाच्ने भनेर समय निर्धारण गर्ने) पनि गरिन्छ । डिवाँ तीन, पाँच, सात बर्षको हुन्छ । डिहाँ राख्नको लागि गुर्वाद्वारा मनौटा (भाकल) गरिन्छ । डिवाँ अनुसार नाच हुन्छ । यसरी बर्का नाचको सबै पूजा–पाठ सकिन्छ ।
यो सामुहिक नाच हो । यसको लागि पाँच जना जामा, पाँच जना लहँगा र पाँच जना धोटीवाल गरि १५ जना हुन्छन् । त्यस मध्ये पाँच जना मुङ्ग्रा लिएर नाच्छन् भने अरु मजिराले नाच्छन् । तीन जना मादले र दुई जना जोक्कर पनि हुन्छन् । यसैगरि बर्कीमार गाउने ‘मोर्हिया’ (गीत उठाउने व्यक्ति) सहित अरु छ जना पनि हुन्छन् । पराम्परागत नाच उल्लेखित संख्यामा कलाकार रहने भने पनि कलाकारको उपस्थिति अनुसार कमबेसी पनि हुन सक्ने अभियन्ताहरु बताउँछन् । यो नाच खास गरे पुरुषहरु मात्रै नाचिन्छ । तर पछिल्लो समयमा महिलाहरु पनि नाच्ने गरेको पाइन्छ । महिलाहरु नाच्ने नाच माथि उल्लेखित नाच भन्दा भिन्दै हुन्छ । तर त्यही नाचबाट प्रभावित भएको मानिन्छ । यो नाचको शुरुवात देउखुरीको रनियापुर गाउँबाट भएको देखिन्छ । सोही गाउँका पृथ्वीमान चौधरीले नाच्न सिकाएको भनाइ छ । महिलाहरु आफ्नो मौलिक पहिरनमा मादलको तालमा मजिरा बजाएर नाच्छन् । यो नाचमा बर्कीमार गीत हुँदैन । यसलाई मंजिरा नाच पनि भन्छन् । पैइयाँ लगैना पनि यसै अन्तर्गतका नाचमा पर्छ । पछि यही नाच सखिया नाचको रुपा विकसित भयो । सखिया नाच गीत गाएर नाचिन्छ । तर बर्का नाच जस्तै गीतको भूमिका यसमा पनि गौण हुन्छ, मादलको नै प्रधानता हुन्छ । यो ‘सखिया गीत’ गाएर नाचिने भएको हुनले यसलाई सखिया भनिएको हो । यो गीतमा प्रेम, नारी संवेदनाको बारेमा चर्चा गरिएको पान्छ । जुन कृष्णको जीवनीसंग सम्बन्धित छ । तर यो कृष्णाष्टमीमा न नाचेर बिशेषतः दशैं तिहारमा नाचिन्छ । त्यसैगरि पुरुषहरु पनि अलि भिन्नै किसिमले नाचेको पाइन्छ । मादलको उही तालमा पुरुषहरु(कठपुतली लिएर नाच्थे । तर आजभोलि यो नाच पूर्ण रुपमा लोप भइसकेको छ । महिलाहरु भने मंजिरा लिएर नाच्छन् । पछि पुरुषहरु लठ्ठी लिएर नाच्न सिके । यो नाच पनि देउखुरीकै गोबरडिहा गाउँबाट शुरु भए हो । लठ्ठीले नाच्ने भएर यसलाई ‘लठ्ठिहवा नाच’ भनिएको हो । अहिले पनि यो प्रचलनमा छ । जे जस्तो भए पनि बर्का नाचकै देखासिकी नाच हो भन्न सकिन्छ ।
बर्का नाच सुम्रौतीबाट शुरु हुन्छ । सुम्रौती भनेको आफ्नो देवी देउताहरुलाई निम्ता गर्ने अर्थ लाग्छ । त्यसकारण आफ्ना सम्पूर्ण देवी देउताहरुलाई निम्तो गरिसकेपछि नाच शुरु हुन्छ । सुम्रौती यसप्रकारको हुन्छ :
सरस्वती सुमिरौं जीउकै जोटी
अपदरप सुमिरौं गजमोती
पण्डो कथा कहाँ लैजाउँ
जहाँ सुनाउँ वहाँ वासुक नाग
भगमती शरण लेबुँ तोर नाउँ
देखी धरमदेवी बन्धन बा ।
सुम्रौती गाएर देउताहरुलाई छाँकी चढाइन्छ । त्यसपछि गाउँको ककन्डरवा (महट्वाँ, बरघरिया, प्रधान) घर जान्छन् । ककन्डरले ठूलो सम्मान गर्छन् । सगुनको रुपमा ककन्डरकी गधुनियाँ (स्वास्नी) उनीहरुको शुभ साइतका लागि सेतो टीका (पीठो या चामल) लगाएर छाँकी दिन्छिन् । त्यसपछि नाच गर्दै अन्य ठाउँमा पनि जान्छन् । यो नाचले सुबिकाल हुन्छ, शान्ति हुन्छ, भूत–प्रेत आइदैन्, जमीनमा उर्वराशक्ति आउँछ र बालीनाली राम्रो हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ । नाचमा विभिन्न देवी देउताहरुलाई निम्तो गरिएको हुन्छ । नाचमा विशेषतः करैयाकोट, घोड्डग्रैया, कन्डरा, बाइसमाथा, कोटिया, भगतभार, डुमडुमवा र ठाउँ अनुसार अन्य मन्दिरका देउताहरुलाई निम्तो गरिएको हुन्छ । उनीहरुलाई गुर्वाले आफ्नो मन्तरको माध्यमबाट निम्तो गर्छन् । उनीहरुको छायामा पर्दा नाच्ने वा हेर्नेहरु मूर्छा पर्ने डर हुन्छ । त्यसैले कलाकारहरु गुर्वाले दिएको साजेको चामल (अक्षेता) र पानी मात्रै पिउँछन् । नाच्ने ठाउँमा समय–समयमा अक्षेता छिटिरहन्छन् । यो नाच नाच्दा डेशबँढिया गुर्वालाई बोलाइएको हुन्छ । गुर्वा सुरही गाइको पुच्छर लिएर चारैतिर अक्षेता छित्दै घुम्छ । कलाकारहरुलाई दिसा–पिसाब लाग्यो भने साथमा एक जना गुर्वा र हातमा अक्षेता लिएर मात्र जान्छन् । फर्केर पुनः लिएर गएको चामल डेशबँढिया गुर्वालाई दिन्छन् । यसो गर्दा भूत–प्रेत, बोक्सीहरु कलाकारहरु माथि आँखा लगाउन पाउँदैन । यसरी कहिलेकाही नाच हेर्दा वा नाच्दा मूर्छा परे भने शान्त ठाउँमा लगेर गुर्वाले साजेको पानी छर्कने र सुरही गाइको पुच्छरले हम्किने गरिन्छ । यसरी पानी छर्कने र हम्के पछि मूर्छाबाट छुटकारा पाइन्छ भन्ने जनधारणा छ ।
यसरी यो नाच देवी देउताहरुको स्तुतीगानमा नाचिने महाभारतको बेजोड प्रस्तुति हो । यसको नृत्यशैली र क्रियाकलापले कुरुक्षेत्रको लडाई प्रतिविम्वित गर्छ । त्यसकारण यसलाई पौराणिक नाचको रुपमा पनि लिइन्छ । बर्कीमार, महाभारत ग्रन्थको भाव अनुबादित गीतिग्रन्थ भएपनि यसका विभिन्न सन्दर्भ र घटनाहरुमा थारु जातिको मौलिकता झल्किन्छ । र त्यही मौलिकताभित्र पहिचान लुकेको छ । तर अहिले बर्का नाच ठूलो चुनौतिको सामना गर्दैछ र सदाका लागि लोप हुने अवस्थामा पुग्दैछ । यसको भविष्य र अस्तित्वरक्षाको लागि ‘जलौरा’ले एक्लो दुस्प्रयास गरिरहेको छ । युवापुस्ता मौन हेरिरहेका छन् । यसरी पुस्तान्तरणमा देखिएको दुरी पनि एउटा कारण हो । पुराना पुस्ताले दिन नसक्नु र नयाँ पुस्ताले लिन नचाहनु गम्भीर समस्या यही छ । नयाँ पुस्ताले चाँसो लिनै पर्छ । यदि यसको समाधान नखोजे भोलिको दिनमा यसलाई बचाउन सक्ने कुरा प्रायः असम्भव नै देखिन्छ । अर्को समस्या आर्थिक पनि हो । पूजामा अत्याधिक खर्च लाग्ने हुनले खर्चको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने पनि हो । तर यसलाई समयसंगै कम खर्चमा गर्न सकिने वातावरण तयार गर्न सक्नु पर्छ । सँधै पराम्परा टेकेर काम गर्न सकिने अवस्था हुँदैन । त्यसकारण समय अनुसार परिमार्जन र कम खर्चमा पनि गर्न सकिन्छ । संस्कृति अलौकिक वस्तु होेइन । योे पनि मान्छे नै आफ्नो अनुकुल र मौलिकतामा चल्दै आएका चलनहरु हुन् । त्यसैले मानव निर्मित संस्कृतिलाई स्वयम मानवले समयानुकूल बनाउन सकिन्छ । यसको लागि थारू समुदाय स्वयं आफै लाग्नु पर्छ र सरकार पनि सहयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
थारू सखिया, मुङ्ररहुवा, झुम्रा, लठ्ठिहुवा, मघाैटा जसिन थारू नाच हेरक लाग यहाँ जार्इः
जितिया पर्व थारु महिलाहरुको एउटा महान सांस्कृतिक पर्व हो । यो पर्व थारु बाहेक तराईमा बसोबास गर्ने मधेसी महिलाहरुले पनि धूमधामसंग मनाउँछन् । महिलाहरु संगसंगै पुरुषहरु पनि सक्रिय हुनुपर्ने भएकोले यस पर्वलाई महिलाहरुको मात्र नभई महिला–पुरुष सबैको साझा पर्व भन्न सकिन्छ । जितिया पर्व ठाउँ अनुसार केही फरक तरिकाले मनाईन्छ । पूर्वी तराईमा विवाहित महिलाहरु मात्र ब्रत बस्छन् । तर चितवन र यस आसपासका जिल्लाहरुमा विवाहित र अविवाहित सबैले समान रुपमा ब्रत बस्दछन् । यो पर्व आश्विन कृष्णपक्षको सप्तमी, अष्टमी र नवमी तिथिमा तीन दिन मनाईन्छ । सप्तमीको दिनलाई "लाहा खाएके", अष्टमीको दिनलाई "उपास" र नवमीको दिनलाई "पारन" भनिन्छ । जितिया ब्रत दुई किसिमको हुन्छ– साधारण र खर जितिया । सप्तमीको बिहान ब्रतालुहरु नजिकको खोला–नदीमा गई तोरीको पिना प्रयोग गरी नुहाउँछन् । नुहाइसकेपछि अलिकति तोरीको पिना घिरौलाको पातमा राखेर खोलामा बगाउने चलन छ । तर अचेल घिरौलाको पातको सट्टा कर्कलाको पात पनि प्रयोग गरिन्छ । जितिया ब्रत कथा अनुसार चील्हो, सियरो नाम गरेका चील र स्याल जस्ता जनावरहरु पनि जितिया ब्रत बस्ने भएकोले ती जनावरहरुका निम्ति पातमा राखी पिना बगाउने गरिएको हो । त्यस दिनभरि चोखो बसी बेलुका फेरि खोलामा गई नुहाउँछन् । सोही राती कुखुरा नबास्दै "डट्खट" वा दर खाने गर्दछन् । "खर जितिया" ब्रतमा "डट्खट" खाइदैन । दर खाईसकेपछि ब्रतालुहरु जाग्राम बस्नुपर्दछ । उनीहरुले प्रत्येक घरबाट गीत गाउने महिला र पुरुषहरुलाई ब्युँझाएर गाउँको एकै ठाउँमा भेला गराउँछन् । ती रौराहर (गवैया) महिला पुरुषहरुले त्यसबेला गाउने गीतलाई "बदहा गीत" भनिन्छ । बदहा गीत भोलिपल्ट अर्थात अष्टमीको बिहान सम्म गाउने चलन छ । बिहान सबेरै ब्रतालुहरु सबैजना खोला–नदीमा गई स्नान गर्छन् र अघिल्लो दिनझै पातमा पिना राखी बगाउँछन् । स्नान गरेर फर्केपछि सबैजना भेला भई बेलको पात टिप्न जान्छन् । त्यसलाई "बेलपाती लोर्हे जाई" भनिन्छ । ब्रतालुहरुसंगै गवैया महिला पुरुषहरु पनि जान्छन् । बेलको रुखको चारैतिर ब्रतालुहरु "झमटा नृत्य" र गीत प्रस्तुत गर्दछन् । त्यसबेला गाउने गीतलाई "फुला लोर्होनी गीत" भनिन्छ । गीत समाप्त भैसकेपछि मात्र ब्रतालुहरुले बेलको पात टिप्छन् । बेलको पात घरमा ल्याइसकेपछि उनीहरुले एक दुई माना जति मास भिजाएर राख्छन् । त्यस दिन ब्रतालुहरुले पानी पनि नखाई उपवास बस्छन् । त्यसदिन महिलाहरु नयाँ सांस्कृतिक भेषभूषा लगाई दिनभरि नै झमटा नृत्यमा झुमेर रम्छन् । उपासको बेलुकीपख करीब तीन–चार बजेतिर ब्रतालुहरु फेरि खोलामा गई पिनाले नुहाई पातमा अलिकति पिना बगाउँछन् । त्यसपछि घरमा आई नयाँ नयाँ पहिरनमा जम्मा भई पाकडी वा पीपलको बोटमूनि झम्टा नृत्यमा झूम्छन् । गवैया महिला पुरुषहरु पनि त्यहाँ जम्मा भई गीत गाउँछन् । त्यसबेला गाउने गीतलाई "डार कटोनी गीत" भनिन्छ । उता केटाहरु रुखमाथि चढेर रुखको हाँगा काट्न तम्तयार हुन्छन् र गीत सकिएपछि एउटा सानो हाँगा काटेर झारीदिन्छन् । ब्रतालुहरुले त्यस हाँगालाई भूँईमा नखसाली कथा सुन्ने ठाउँमा लिएर जानु पर्ने हुन्छ । तर बाटोमा केटाहरुले एउटा मोटो रस्सी तेस्र्याएर बाटो छेक्छन् । गवैयाहरुले सुरीलो स्वरमा गीत सुनाएपछि बल्ल बाटो छोड्छन् । त्यसबेला गाउने गीतलाई "डगरोट गीत" भनिन्छ । कथा सुन्ने ठाउँमा त्यो हाँगा गाडेर सानो रुख बनाइन्छ । रुखमा चीलको गुँड पनि बनाइन्छ । त्यस रुखको चारैतिर ब्रतालु महिलाहरु फलफुल, पानी, दूध, दहि साथै बिहान भिजाएको मास र चामल लिएर बस्छन् । गाउँको कुनै एक भद्र पुरुषले जितिया ब्रत कथा घण्टौं लगाएर सुनाउँछ । कथा सकिएपछि सबै जना घर गएर फलाहार गर्छन् । त्यसलाई "फराहर" भन्छन् । भोलिपल्ट अर्थात् नवमीको दिन सबेरै सबै ब्रतालु फेरि खोलामा नुहाएर खोलाको किनारमा निराकार प्रतिमूर्ति (जसलाई थारु भाषामा "गरग्वाङ" भनिन्छ), बनाएर मासको गेडाले पूजा गर्छन् । मासको गेडा केहि दिनपछि त्यस "गरग्वाङ" मा राम्ररी उम्रिएमा त्यस ब्रतालुको सन्तान सुखको राम्रो लक्षण मानिन्छ । खोलाबाट घर आइसके पछि ब्रतालुहरु दहि चिउरा, केरा लगायतका खानेकुरा खान बस्छन् तर खानु भन्दा अगाडि गुइँठाको अङ्गारमा काठको धुप बाली सबै खानकीको केही अंश चढाएर मात्र खान्छन् । त्यसलाई "पारन" भनिन्छ । त्यसपछि भने ब्रत सकिन्छ र ब्रत सकिएपछि अन्य परिकार माछा, मासु लगायत खान्छन् । पारन गरिसके पछि बाँकी रहेको भिजाएको मास भुटेर खान्छन् । त्यसदिन पनि दिनभरी झम्टा गीत र नृत्य गरिन्छ साथै सबैको घरबाट केरा, चिउरा, फलफूल बटुलेर कथा भन्ने मान्छे र पीपलको हा"गा काट्ने केटाहरुलाई दिन्छन् । यसरी जितिया पर्व सकिन्छ ।
जितिया ब्रत कथालाई जितबाहनको कथा पनि भनिन्छ । यो कथा परापूर्वकाल देखि प्रत्येक बर्ष जितियामा ब्रत बस्ने महिलाहरुले अनिवार्य सुन्नै पर्ने हुन्छ । यो कथा नसुन्ने ब्रतालुहरुको ब्रत अपुरो भएको मानिन्छ । वास्तवमा, यो कथा एउटा पौराणिक तथा नैतिक कथा हो । यसले ब्रतालुहरुलाई अनुशासित र कर्तव्यपरायण बनाउनमा निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो कथाको पुरा अंश भन्न सात आठ घण्टा लाग्छ तर अचेल एक दुई घण्टामै पनि सिध्याइन्छ । कथालाई मुख्य दुई खण्डमा ब्याख्या गरिन्छ । ती दुई खण्डमा पनि अन्य सहायक खण्डहरु छन् । यहाँ पहिलो खण्डको मात्र सारांश उल्लेख गरिएको छ । कथा अनुसार एउटा छुट्टै संसारमा छुट्टै राज्यको उदय हुन्छ जहाँ दुई वर्गको पनि अस्तित्व हुन्छ । एउट वर्ग राजखान्दान र अर्को रैति । सोहि राज्यमा एउटा अविवाहित बुढीकन्याले कुनै पुरुषको संसर्ग विना नै एउटा छोराको जन्म दिन्छ । उमेर पाको भएकोले सबैले ती कन्यालाई "मस्वासी बुढीया" भन्थे र उनको छोरोलाई "मस्वासी बुढीयाको छोरा" । बुवाको कुनै अत्तोपत्तो नभएकोले छोराको नामाकरण नै भएन । आमाले छोरालाई "बबुवा" भनी सम्बोधन गर्थे । हुर्किदै बढ्दै जाने क्रममा त्यो बालक अति नै तीक्ष्ण बुद्धि भएको र निकै प्रतिभावान बन्दै गए । जुनसुकै खेलकुदमा उसलाई हराउन सक्ने कोही पनि भएन । राजखन्दानका बालकहरुसँग खेल्ने क्रममा पनि सबैलाई जित्दै जान्थे । हारेको रिस पोख्ने क्रममा ती राजखान्दानका बालकहरुले उनलाई निकै पिट्थे । तर एकदिन पिटाइसगै गाली गरे । उनलाई भनिएको थियो– "बिना बाउको छोरो" । त्यो बचन बाणको शब्दले उनी निकै रोए । ऊ सधै झै रुँदै घर आउँथे तर त्यस दिन आमाबाट आफ्नो बाबाको बारेमा जान्ने अडान लिन्छ । केही सीप नलागी आमाले बाध्य भएर आफ्नो जीवनमा घटेको घटनाको वृतान्त सुनाउँछिन् । वास्तवमा उक्त गरीब बुढी एक्लै बस्थे । एकदिन राजपरिवारका सदस्यको क्रियाक्रमका लागि बुढीलाई पनि रक्सी बनाउन धान ल्याइ दिएका हुन्थे । तर वर्षात को मौसमका कारण धेरै दिन झरी बादल लागेर धान सुकाउन नपाएकोले बुढीले भगवानको जप गर्दै जसरी भए पनि धान सुकाउने व्यवस्था मिलाई दिन प्रार्थना गरिन् र आफ्नो भाकल पूरा भए पछि आफूले भगवानले चाहेको कुरा अर्पण गर्ने भाकल गरिन् । भाकल पुरा भएपछि बुढिले आफ्नो बाचा बिर्सिइन् जसले गर्दा भगवानले श्राप दिदै घरको करेसाबारीमा पिसाब फेरिदिए । पिसाबबाट हरियो लहलहाउँदो साग उब्जियो तर श्रापको कारणले वरिपरिका सबै तरकारीका बोट सुकेर गए । तरकारीको अनिकालमा बुढिले भगवानले पिसाब फेरेको ठाउँमा उम्रेको साग पकाएर खाएपछि सोही दिन देखि गर्भवती भएको सबै कहानी बुढिले आफ्ना छोरालाई बताउँदै "बाबु तिम्रो बाबा स्वयम् भगवान नै हुन्" भनी आश्वस्त पारिन् । अब भने छोराको मन शान्त त भयो तर छोराको अर्को अडान बुढीआमाले थेग्न सकेन । वास्तवमा छोराले लिएको अडान थियो "बाबाको खोजी गरेर आफ्नो नामाकरण गराउने" ।
केही सीप नलागी बुढीआमाले आफ्नो एक्लो सहारा आफूबाट टाढा पठाउन बाध्य भईन । त्यो केटो बर्षौ सम्म बाबाको खोजीमा भौतारिदै गए र त्यस क्रममा उनले थुप्रै थुप्रै दुःख र पीडामा बाँचीरहेका मानव र पशुपंक्षीहरुलाई भेटे र सबैको आग्रह बमोजिम उनीहरुको दुखको कारण र त्यसबाट मुक्त हुने उपाय पनि भगवानबाट पत्ता लगाउने आश्वासन दिदैं गए । कठोर यात्रा पछि उनी त्यस्तो ठाउँमा पुगे जहाँ समुद्र पार गर्न सकेको खण्डमा आकाशको र धर्तीको मिलन हुने क्षितिज फेला पर्छ । त्यसै ठाउँबाट आकाश मार्ग भएर उनले भगवानलाई भेट्न सफल भए । उनी देवी देवताको रथ गुड्ने बाटोमा कुरेर बसे । त्यस बाटो भएर गुड्ने सबै रथ रोक्दै "भगवान को हो ?" भनी सोध्थे । देवी देवताको रथ रोक्न सक्ने बालक कुनै साधारण बालक हुनै नसक्ने अड्कलकासाथ सबैले भगवानकै छोरा भनी परिचय पाउँथे । अन्तमा त्यो बालकले भगवानको पनि रथ रोकी दिन्छ । भगवान पनि अचम्ममा पर्दै "को हौ तिमी" भनी सोधे । बालकले आमाको सबै कथा सुनाएर उनकै छोरा भएको पुष्टि गरेपछि भगवानले पनि आफ्नै छोरा स्वीकार गरी काखमा राखी मुख्य उद्देश्यको बारेमा सोध्छन् । आफ्नो छोरा पहिचानको लागि यति संघर्ष गरी भेट्न आएको थाहा पाई नामाकरण गरी पहिचान दिन्छन्– "आजै देखि तिम्रो नाम 'जितबाहन' भयो, संसारका सबै प्राणी जगतले तिम्रो नाममा ब्रत बस्नेछ ।" त्यति मात्र नभई बालकले यात्राको क्रममा भेटिएका सम्र्पूण पिडित र दुखीहरुको रहस्य पनि भगवानबाट थाहा पाए अनि त्यसबाट छुटकारा दिलाउने उपाय पनि आशिर्वाद स्वरुप पाए । फर्किने क्रममा पहिले आफूले भेटेका सबै दुखी प्राणीहरुलाई उनीहरुका दुखका रहस्य र मुक्तिको उपाय भन्दै गए । वास्तवमा ती दुखीहरुको दुखको कारण उनीहरुको पूर्वजन्मको फल नभई यहि जन्ममा गरेको कुकर्मको फल हो भनी बताउँदै फर्के । उनले दिएका ज्ञानगुनका उपदेशहरु यसप्रकारका छन् "आफ्नो व्यक्तिगत मात्र नभई अरुको सरसफाइमा पनि ध्यान दिनुपर्ने, वातावरण सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने, पाहुनाहरुको सत्कार गर्नुपर्ने, अरुको बालीनाली मास्न नहुने, बाटोघाटो मास्न नहुने, आफ्नै खाद्यान्नमा चित्त बुझाउनु पर्ने, आफूले जानेका ज्ञानगुनका कुराहरु अरुलाई सिकाउनु पर्ने, छोराछोरीको विवाह समयमै गरिदिनु पर्ने" इत्यादि हरेक उपदेशको छुट्टाछुट्टै पट्कथाहरु पनि जितियाको कथाको यस खण्डमा रोचक तरीकाले बयान गरिन्छ ।
थारु समुदायमा जितियाको ब्रत बसेका ब्रतालुहरुले सुन्ने जितबाहनको कथा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । निष्ठापूर्वक ब्रत बसी बेलुकाको समयमा जितबाहनको कथा सुन्ने महिलाहरु जीवनभरी नै अनुशासित हुन्छन् । महिलाहरुलाई मात्र नभई पुरुष वर्गलाई पनि कथाले विभिन्न व्यवहारिक ज्ञान सिकाउँछ र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि कथाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । बाबाआमाले आफ्ना छोराछोरीले बिराएको समयमा "तिमीले जितियाको कथा सुनेनौं ?" भनी झक्झकाउने गर्दछन् । वर्तमान समयमा नैतिकताको खडेरी पर्न थालेको बेलामा थारु लगायत जितिया पर्व मनाउने सबै समुदायलाई जितियाको या जितबाहनको कथाको माध्यमबाट नैतिकवान बनाउन सकिन्छ । पहिचानको वकालत गर्नेहरुले समेत जितबाहनले चाहेकै जस्तो पहिचान खोजीरहेका प्रसंग पनि मिल्छ । कथाअनुसार आफ्नो नाम या पहिचानका लागि भगवानलाई भेट्न हिडेको केटोले आफ्नो नामाकरण मात्र चाहेको भए उसले बाटोमा भेटेका दुःखीहरुको पीडालाई कम गर्न सक्ने थिएन । तर उनले पाएको अधिकार सहितको पहिचानले सबैको दुःख पीडाबाट मुक्तिको मार्ग पहिल्याउन सफल भए । देशको वर्तमान परिस्थितिमा पहिचान पक्षधरले चाहेको पहिचान पनि यस्तै खालको अर्थात सबै वर्ग, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्रको पीडा कम गर्न सक्ने खालको पहिचान हो । यसकारण पनि जितबाहनको कथा एउटा पौराणिक कथा भएता पनि समय सान्दर्भिक रहेको देखिन्छ ।
अष्टिम्की हस्तचित्र एक परिचय
कृष्णजन्माष्टमी अर्थात कृष्ण भगवान जन्मेको दिनलाई थारुहरु अष्टिम्कि पर्वको नाउँले चिन्छन। यस पर्वमा बिशेष भित्तेचित्र अष्टिम्की बनाएर यस चित्रमा चित्रित पात्रहरुलाई महिलाहरुले "टिक्ने" अथवा टिका लगाउने र पूजा गर्ने थारु चलन रहेको छ। अष्टिम्की चित्र घरको पिढीको भित्तामा बनाइन्छ। गाउँको घरसंख्या हेरी टोलको एक/दुई घरको भित्तामा अष्टिम्की चित्र बनाइन्छ। यस हस्तचित्रमा प्रयोग गरिने रङहरु सबै घरेलु रंगहरु प्रयोग हुने गर्थ्यो अर्थात बजारमा उपलब्ध रासायनिक (Chemical ) रंगहरु प्रयोग नगरी, जैविक (Organic ) रंग हरु जस्तै हरियो रंगको लागि - सिमिको पात निचारेको रस, रातो रङको लागि पोइ को पातको रस, पहेंलो रंग हल्दी या बेसारको प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिले बिकास संग संगै अरु किसिमका रंग र बजारबाट बनि बनाउ तस्विरहरु प्रयोगमा बृधि भएको छ। जसले गर्दा यो हस्तचित्र लोप हुने खतरा बढेको छ।
के के हुन्छ अष्टिम्की चित्रमा ?
चित्रको शीर्ष भागमा यस पर्वका नायक श्रीकृष्णको चित्र हुन्छ। त्यसको तल दायातर्फ सूर्य र बायातर्फ चन्द्रमाको चित्र हुन्छ। सोही लहरमा हातमा छाता लिएका पाच पुरुषको चित्र हुन्छ। यसलाई पाच पाण्डवको प्रतीक मानिन्छ। बनवासका क्रममा उहाहरू विभिन्न देश घुम्न जानुभएको झलक प्रस्तुत गर्दै उक्त चित्रमा उहाहरूले घाम पानीबाट जोगिन छाता लिनुभएको देखाइन्छ। दोस्रो लहरमा काधमा बन्दुक भिरेका सात जनाको चित्र हुन्छ। यसले सय भाइ कौरवको प्रतिनिधित्व गर्छ । यही लहरमा कतै कतै सात महिलाको चित्र पनि बनाउने गरिएको र त्यसले द्रौपदीको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको जानकारी आफूले पाएको देवेन्द्र थुम्केलीले काठमाडौा विश्वविद्यालयका लागि २०६५ सालमा गर्नुभएको 'थारू लोककला' शीर्षकको अध्ययनमा उल्लेख गर्नुभएको छ। यसरी चित्र बनाउने व्यक्ति अनुसार चित्र फरक पर्न गएको पनि देखिन्छ।
अष्टिम्की चित्रमा महाभारतसागै रामायणको कथा पनि समावेश गर्ने गरिएको देखिन्छ। बाह्र टाउका भएको 'बरमुरवा' अर्थात् रावणलाई चित्रको मध्य भागमा स्थान दिइएको हुन्छ। यसमा बिहेको डोली, डोलाको चित्र पनि हुन्छ। यसलाई राम र सीताको विवाहको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। बीच बीचमा मादले, नर्तकीहरूका चित्रले पनि ठाउ पाएका हुन्छन्। यसवाहेक हात्ती, घोडा, ऊँट, कुखुरा, वनजङ्गल, माछा, मयुर आदिको चित्रले पनि अष्टिम्कीमा ठाउा पाएका हुन्छन्।
अष्टिम्की चित्रमा चित्रित केहि मुख्य
कजरिक बनवा : कृष्ण भगवानले आफ्नो लाला बाला (गाई, गोरु, बाछा) चराउन लैजाने वृन्दावनलाई कजरिक बनवा भनिन्छ। घना र अँध्यारो भएको हुनाले कजरिक बनवा भनिएको हो
फूल : सोह्र सय गोपिनीलाई कृष्णजीले प्रेमको प्रतिकको रुपमा उपहार दिने हुनाले अष्टिम्की चित्रमा फूल बनाइन्छ
मयुर : कृष्ण भगवानको मनपर्ने पक्षीको रुपमा चिनिन्छ र कृष्ण मयुर पंखको शृंगार गर्ने गर्थे
रोइना : सबै भन्दा बायाँ तिर बरमुर्वा (बार शिरयुक्त रावण) चित्रित गरिन्छ । रावणको यो भयानक रुपलाई भने टिक्ने/पूज्ने गरिदैन । यसलाई झुक्किएर टिक्यो भने रुन्चे बच्चा जन्मिन्छ भन्ने बिश्वास गरिन्छ।
लाउ: पृथ्वीमा महाप्रलय हुँदा भगवान विष्णु दुनामा सवार भै विचरण गर्नु हुन्थ्यो। केहिको भनाइ अनुसार कृष्णजीले यमुना नदि पार गर्दा लाउ (नाउ) प्रयोग गर्ने हुनाले अष्टिम्की चित्रमा चित्रित गरिएको हो
हलो जोति रहेको मान्छे : मानव सभ्यताको विकासक्रममा खेति पाती एउटा महत्वपूर्ण अध्याय हो जुन अहिलेको थारु समुदायमा उही अवस्थाको रहेको छ।
पुरैनिक पतिया (पात) : सोह्र सय गोपिनी नुहाउने सुन्दर ठाउं जहाँ पुरैनीको फुल फुल्थ्यो र फूल संगै कन्चन पानीमा जलक्रिडा गर्न गोपिनी हरु मोहित हुन्थे, कृष्ण भगवान उनीहरुको वस्त्र लुकाई दिएर, जिस्काई दिन्थे।
मुर्गा : समयबोध गराउने यो घरेलु पंक्षी जसको बोलिले मानवले समय निर्धारण गर्न सिके, अहिले पनि अष्टिम्की पर्वमा मुर्गाको बोलिको महत्व छ। अष्टिम्कीको डटकतटन (दर) खाने कार्य मुर्गा बोल्नु भन्दा अगावै गर्नु पर्छ, बीचमा मुर्गा बास्यो भने जुठो हुन्छ।
रोइनि मछरिया : थारु लोक कथा अनुसार जब सृष्टिकर्ताले यो पृथ्वी सृष्टि गर्न लागे तब जल र थल बनाए त्यस पछि पृथ्वीमा मत्स्य अवतारको रुपमा रोइनि मछारियाको जन्म भएको हो। जलचरहरूले तेस्रो यूग अर्थात अगभग ५८–२८ करोड वर्ष पहिलेको पुराजैवीक यूगको स्मरण गराउँछन् । जुन युगमा उक्त जीवहरूको उत्पत्ति भएको थियो । भूगर्भशास्त्रअनुसार ३९ करोड वर्ष पहिले शुरु भएको पुराजैविक युगमा माछाको उत्पत्ति भएको थियो । थारु लोकग्रन्थ गुर्वावक जर्मौटीमा उक्त माछालाई “रोइनि मछर्या” भनिएको छ । यसैकालमा पुराणमा मत्स्य युग मानिएको छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार यस यूगलाई डिमोनियम उपयुग भनिएको छ । गुर्वावक जर्मौटी अनुसार गुर्वावाले गङ्गटा र गँड्यौलाकै सहयोगबाट पाताललोकबाट “अम्मरमाटी” (माटो) मगाएर स्थल मण्डलको निर्माण गरेका हुन् । वैज्ञानिकहरूका अनुसार गङ्गटा र गँड्यौला उत्पत्ति भएको यूगलाई क्याम्ब्रियन र सिलुरियन उपयुग मानिन्छ । यस युगमा विभिन्न जीवजन्तुको उत्पत्ति भएको कारणले महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
डोली : मध्यखण्डमा विवाहमा दुलहाको तर्फबाट दुलही अन्माउँदा प्रयोग गरिने थारु परम्परागत डोली चित्रित गरिन्छ जसलाई दुईजना डोल बोक्वाहरूले बोकेका हुन्छन् । त्यस डोलीमा पाण्डवहरूले अन्माउँदा गरेको द्रोपतीको चित्रण गरिन्छ । डोलीमाथिको पंक्तिमा पाँचवटी द्रोपतीहरू र सो माथि पाँच पाण्डवहरू चित्रित गरिन्छ ।
सख्ली कुकनिया (मादा कुकुर) : बनवासमा रात बिरात बिरानो ठाउँ सुत्नु परेको हुनाले पहरेदारको भूमिका सखलि कुकनियाले निभाएको भएर यसलाई अष्टिम्की चित्रमा स्थान दिएको हो
यस्तै हाती, घोडा, बाँदर, चरा चुरुंगी, सांप, किरा, गोजर जस्ता अन्य जीवहरुले बनवासको बेला सघाएको मानिन्छ। हाती घोडा सवारीको रुपमा र युद्धको बेला प्रयोग भएको, बाँदरले फल/आहार ल्याएको र चरा चुरुंगीले संदेश आदान प्रदानमा सहायता गरेको लोक कथा उल्लेख छ।
(सन्दर्भ सामग्री : हमार संस्कृति, कोपिला, कृष्णराज सर्वहारी, सरिता चौधरी) Copied: Tharu Community
कोल्कहा टिहुवार गुरिया/गुर्ही
नृत्युमा पनि कम छैनन थारु समुदाय
थारु जातिको ‘लौसर्ना’ पूजाको : एक चर्चा
चिरै / चरै / चिरै भजहर